Jery taratra… herinandro: mila lamina mitoetra sy maharitra | NewsMada
Navoakan’ny Ceni sy ny rafitra manokany eny anivon’ny faritany tamin’ny fomba ofisialy ny ny voka-pifidianana tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsain’ny Tanàna. Ho an’ny kaominina Antananarivo Renivohitra, ohatra, mitarika amin’ny isam-bato 81 351 ny kandidà ben’ny Tanàna natolotry ny IRD, Andriantsitohaina Naina.
Tontosa soa aman-tsara ny fihaonambem-pirenena nakan-kevitra “Dinika Nosy malagasy: ampitao ny hevitrao”, teny amin’ny CCI Ivato, nandritra ny hateloana. Nodinihina tamin’izany ny famerenana ireo Nosy malagasy amin’ny fiveloman’ny Malagasy, ny taranaka mifandimby, ny fandriampahalemana ary ny fiandrianam-pirenena.
Nisy ny fehinkevitra natolotra ny filohan’ny Repoblika tamin’izany. Anisany, ohatra, ny fampidirana ireo Nosy malagasy ao amin’ny lalàmpanorenana, fandaharam-pampianarana, sarintanin’i Madagasikara, fampiasana izany amin’ny filazana ny toetr’andro. Ny Nosy Sambatra izany, ny Nosy-Kely, ny Nosy Bedimaky, ny Nosy Ampela.
Vita ny fifanatrehan’ny Antenimierampirenena sy ny governemanta, nahasahana ny lafim-piainan’ny vahoaka: fampanjakana fandriampahalemana, fanamboaran-dalana, famatsian-drano… Nambaran’ny praiminisitra fa tsy maintsy natao ny fanavaozana ny rijantenin-dalàna maro alohan’ny asa, miainga amin’ny vinan’ny filohan’ny Repoblika.
Ny fandalovan’ny rivodoza Belna, nivadika ho andro ratsy, nitondra fandravana tany amin’ny faritra Boeny. Anisan’ny voa mafy tamin’izany ny distrikan’i Soalala. Nisy ny maty na tsy hita popoka, ny tsy manan-kialofana na traboina… Nidina any an-toerana amin’izay hanampiana ireo traboina sy hanarenana ny simba ny tomponandraikitra.
Amin’izany rehetra izany, amin’izao ankatoky ny fetin’ny faran’ny taona izao, mirongatra ny asan-jiolahy etsy sy eroa: fanafihana mitam-piadiana antoandrobenanahary, fakana ankeriny, fanendahana… Mila lamina mitoetra sy maharitra raha tiana ny hisian’ny fanovana, indrindra ny hoe fampandrosoana.